90s ဟစ်ဟော့ဖက်ရှင်ကို ဒါတွေနဲ့အတူ ပြန်လည်ရယူလိုက်ပါ - For her Myanmar
90s ဟစ်ဟော့ဖက်ရှင်ကို ဒါတွေနဲ့အတူ ပြန်လည်ရယူလိုက်ပါ
ဖက်ရှင်တွေတစ်ပတ် ပြန်လည်လာတာကို အမီလိုက်နိုင်စေဖို့
ယောင်းတို့ရေ … street style ဆိုတာ လူငယ်ပိုင်းတွေကြား တော်တော်ခေတ်စားနေတဲ့ ဖက်ရှင်ပါ။ Street Style တွေပေါ်လာတာအခုမှ မဟုတ်ပါဘူး … လွန်ခဲ့တဲ့ ၉၀ ခုနှစ်ပိုင်းတွေကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အင်္ကျီဆိုက်ဒ်အကြီးကြီးတွေ၊ ခပ်ပွပွဘောင်းဘီတွေနဲ့ လူကြီးတွေမျက်စိ ဆံပင်မွေးစူးခဲ့တဲ့ ဖက်ရှင်တွေကို တွေ့ရမှာပါ။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ street style culture တစ်ခုလည်း ပေါ်လာသလို 90s trends တွေကလည်း ပြန်ခေတ်ထ နေတာဆိုတော့ ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီး ဖက်ရှင်အမြင်သစ်တစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲ တူတူကြည့်ကြရအောင်… …
(၁) Oversized Tshirt
ဝတ်နေကျဆိုက်ဒ်ထက် ၃ဆိုက်ဒ်လောက်ပိုကြီးတဲ့ အင်္ကျီပွပွကြီးတွေက ဟစ်ဟော့လောကမှာ အတွေ့အများဆုံးဖက်ရှင်ပါ။ ဒီတိုင်းပွပွဝတ်လို့ရသလို ခါးပတ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးလည်း ဝတ်နိုင်ပါတယ်။
(၂) Baggy Pants
Baggy Pants ဆိုတဲ့ ဘောင်းဘီအရှည်ပွပွတွေကလည်း ဟစ်ဟော့ဖက်ရှင်မှာ ချန်လှပ်ထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ ယောကျာ်းလေးရော မိန်းကလေးပါ baggy pants တွေနဲ့ ဂေါ်ခဲ့ကြတာ ၉၀ခုနှစ်တွေမှာ ကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ ယောင်းတိုင်းမြင်ယောင်နိုင်မှာပါ။
(၃) Bucket Hat
Stella မေမေကတော့ ဒွန်းစဏ္ဍားဦးထုပ်လို့ပြောတယ် ဒီဦးထုပ်တွေက ၉၀ ခုနှစ်ဝန်းကျင်က ဆယ်ကျော်သက်တိုင်းလိုလိုမှာရှိခဲ့ဖူးမယ် ထင်ပါတယ် (Stella မှာတောင် ရှိသေးတယ်)။ အခုနောက်ပိုင်း လူငယ်တွေကြားမှာ ပြန်ရေပန်းစားလာပြီဆိုတော့ မကြာခင်မှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မြင်သွားရဖို့ ရှိပါတယ်။
(၄) Cat Eye Sunglasses
ကြောင်မျက်လုံးလို အပေါ်ကိုချွန်တက်သွားတဲ့ပုံစံ မျက်မှန်တွေကတော့ ယောင်းတို့လည်း အွန်လိုင်းရှော့တော်တော်များများမှာ မြင်တွေ့နေရမှာပါ။ ၉၀ခုနှစ်ဝန်းကျင်တုန်းကတော့ ဒီလိုမျက်မှန်တွေကို နေရာတကာမှာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ 90s kids တွေရဲ့ဖက်ရှင်ကတော့ မီးတောက်အီမိုဂျီပါပဲ။
Related article >>> မိုးရာသီနဲ့ သင့်တော်လိုက်ဖက်မယ့် ဖက်ရှင်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ?
90s kids တွေခေတ်ကောင်းစဉ်အခါက ဘယ်လောက်ပူအိုက်နေပါစေ jacket ကြီးတွေ ဝတ်ကြလွန်းလို့ လူကြီးတွေဆူတာ ငေါက်တာ ခံနေကျရပါ။ ဒီလိုဖက်ရှင်တွေ တစ်ခေတ်ပြန်ထလာပြီဆိုတော့ ဘယ်သူတွေဘယ်လို ပြန်ဆန်းသစ်ကြမလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ရဦးမှာပါ။
ကဲ … ဒါတွေကတော့ ၉၀ခုနှစ်က ဟစ်ဟော့ဖက်ရှင်တွေကို တစ်ဖန်ဆန်းသစ်ချင်တယ်ဆိုရင် ရှိကိုရှိထားသင့်တာလေးတွေပါနော်။ သူများထက်ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ ဖက်ရှင်တွေနဲ့ အထာကျကျလှနိုင်ကြပါစေနော် …
ဖကျရှငျတှတေဈပတျ ပွနျလညျလာတာကို အမီလိုကျနိုငျစဖေို့
ယောငျးတို့ရေ … street style ဆိုတာ လူငယျပိုငျးတှကွေား တျောတျောခတျေစားနတေဲ့ ဖကျရှငျပါ။ Street Style တှပေျေါလာတာအခုမှ မဟုတျပါဘူး … လှနျခဲ့တဲ့ ၉၀ ခုနှဈပိုငျးတှကေို ပွနျကွညျ့မယျဆိုရငျ အင်ျကြီဆိုကျဒျအကွီးကွီးတှေ၊ ခပျပှပှဘောငျးဘီတှနေဲ့ လူကွီးတှမေကျြစိ ဆံပငျမှေးစူးခဲ့တဲ့ ဖကျရှငျတှကေို တှရေ့မှာပါ။
ခုနောကျပိုငျးမှာ street style culture တဈခုလညျး ပျေါလာသလို 90s trends တှကေလညျး ပွနျခတျေထ နတောဆိုတော့ ဒီနှဈခုပေါငျးပွီး ဖကျရှငျအမွငျသဈတဈခုကို ဖနျတီးဖို့ ဘာတှလေိုအပျမလဲ တူတူကွညျ့ကွရအောငျ… …
ဝတျနကေဆြိုကျဒျထကျ ၃ဆိုကျဒျလောကျပိုကွီးတဲ့ အင်ျကြီပှပှကွီးတှကေ ဟဈဟော့လောကမှာ အတှအေ့မြားဆုံးဖကျရှငျပါ။ ဒီတိုငျးပှပှဝတျလို့ရသလို ခါးပတျနဲ့တှဲဖကျပွီးလညျး ဝတျနိုငျပါတယျ။
Baggy Pants ဆိုတဲ့ ဘောငျးဘီအရှညျပှပှတှကေလညျး ဟဈဟော့ဖကျရှငျမှာ ခနျြလှပျထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ ယောကျြားလေးရော မိနျးကလေးပါ baggy pants တှနေဲ့ ဂျေါခဲ့ကွတာ ၉၀ခုနှဈတှမှော ကွီးပွငျးခဲ့တဲ့ ယောငျးတိုငျးမွငျယောငျနိုငျမှာပါ။
Stella မမေကေတော့ ဒှနျးစဏ်ဍားဦးထုပျလို့ပွောတယျ ဒီဦးထုပျတှကေ ၉၀ ခုနှဈဝနျးကငျြက ဆယျကြျောသကျတိုငျးလိုလိုမှာရှိခဲ့ဖူးမယျ ထငျပါတယျ (Stella မှာတောငျ ရှိသေးတယျ)။ အခုနောကျပိုငျး လူငယျတှကွေားမှာ ပွနျရပေနျးစားလာပွီဆိုတော့ မကွာခငျမှာ ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့မွငျသှားရဖို့ ရှိပါတယျ။
ကွောငျမကျြလုံးလို အပျေါကိုခြှနျတကျသှားတဲ့ပုံစံ မကျြမှနျတှကေတော့ ယောငျးတို့လညျး အှနျလိုငျးရှော့တျောတျောမြားမြားမှာ မွငျတှနေ့ရေမှာပါ။ ၉၀ခုနှဈဝနျးကငျြတုနျးကတော့ ဒီလိုမကျြမှနျတှကေို နရောတကာမှာ တှခေဲ့ရပါတယျ။ 90s kids တှရေဲ့ဖကျရှငျကတော့ မီးတောကျအီမိုဂြီပါပဲ။
Related article >>> မိုးရာသီနဲ့ သငျ့တျောလိုကျဖကျမယျ့ ဖကျရှငျကို ဘယျလိုရှေးခယျြကွမလဲ?
90s kids တှခေတျေကောငျးစဉျအခါက ဘယျလောကျပူအိုကျနပေါစေ jacket ကွီးတှေ ဝတျကွလှနျးလို့ လူကွီးတှဆေူတာ ငေါကျတာ ခံနကေရြပါ။ ဒီလိုဖကျရှငျတှေ တဈခတျေပွနျထလာပွီဆိုတော့ ဘယျသူတှဘေယျလို ပွနျဆနျးသဈကွမလဲဆိုတာကို စောငျ့ကွညျ့ရဦးမှာပါ။
ကဲ … ဒါတှကေတော့ ၉၀ခုနှဈက ဟဈဟော့ဖကျရှငျတှကေို တဈဖနျဆနျးသဈခငျြတယျဆိုရငျ ရှိကိုရှိထားသငျ့တာလေးတှပေါနျော။ သူမြားထကျခတျေရှပွေ့ေးတဲ့ ဖကျရှငျတှနေဲ့ အထာကကြလြှနိုငျကွပါစနေျော …
Tags: 90s, Fashion, fashionista, hiphop, street styles, Style, what to wear